Shir-madaxeedka AU - BBC Somali
26 Luulyo 2010
Image caption Shir-madaxeedka AU
Shir-madaxeedkii 15aad ee ururka Midowga Afrika uga socda magaalada Kampala ayaa maanta galay maalintiisi labaad. Welina ajandooyinka shirka waxa ugu mudan wax-ka-qabashada arrimaha Somalia, Darfur, iyo guud ahaan adkaynta ammaanka qaaradda.
Madaxweynaha dalka Uganda, Yuweri Museveni, ayaa isna shirka kaga dhex baaqay in loo baahan yahay in la iska kaashado oo olole caalami ah lagu qaado argagixisada, waxanu mar kale ku hanjabay inuu tallaabo adag ka qaadi doono islaamiyiinta Somalia ee sheegtay weerarradii bishan ka dhaca Kampala ee dadka badani ku dhinteen.
Image caption Madaxweyne Yuweri Museveni
Waxa kale oo madaxwene Yoweri Museveni uu kulan la qaatay hoggaamiyayaasha ciidamadiisa, xilli ay iyaguna soo ifbaxayaa warar sheegaya in jabhadda ADF ee muslimiinta Uganda iyo kooxaha al-Shabaab iyo weliba al-qaeda inuu xidhiidh ka wada dhexeeyo.
Wasiirka Horumarinta Afrika ee dalka Britain, Henry Bellingham, oo isna goob-joog ka ah shirka AU, ayaa shirka u xaqiijiyey in dalkiisu taageerayo qorshaha ciidamo dheeri ah loogu dirayo dalka Somalia, waxase uu suaalo ka qabaa awodda la siinayo ciidamadaasi
Waxa kale oo isna Kampala tegey oo ka hadlay kobcinta dhaqaalaha Afrika iyo deeqaha caalamka, raiisal-wasaarihii hore ee Britan, Gordon Brown.
Madaxda Afrika ka sokow, waxaa shirka jooga diblomaasiyiin reer galbeed ah, kuwa ka socda dalalka iyo Jaamicadda Carabta, iyo Qaramada Midoobey intaba.
Ciidanka loo dirayo Soomaaliya
Image caption Ciidamada nabad-ilaalinta AU
Madaxa Guddiga Sare ee Mdowga Afrika Jean Ping ayaa sheegey in dalalka Guinea iyo Djibouti ay diyaar u yihiin ciidamo inay ku biiriyaan hawlgalka milateri ee Midowga Afrika ka waddo Somalia, iyadoo durba ciidamada Guinea ay tababar ku qaadanayaan dalka Ethiopia ka hor intaaney tegin Somalia.
Ku xigeenka madaxa Guddiga sare ee Midowga Afrika, Erastus Mwencha, ayaa isna sheegey in caqabada ugu weyn ee hortaagan kordhinta ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Somalia jooga ay tahay saadka oo aad u hooseeya loona baahan yahay in dhankaasi si degdeg ah looga daboolo.
Waxa kale oo madaxda ururka Midowga Afrika ay sheegeen inay la xidhiidheen dalal kale oo ay ka mid yihiin Nigeria iyo Koonfur Africa oo ay ka rajaynayaan iyagana in laga helo ciidamo nabad-ilaalineed oo la geeyo Somalia.
Image caption Khasaaraha rayidka
In kasta oo ra'yulcaamka adduunka iyo kan Afrikaba ay taageersan yihiin in la xoojiyo dedaalka wax-ka-qabashada dhibaatooyinka somalia, haddana waxa jira dalal iyo heyado badan oo ka walaacsan in ciidamo iyo hub xad-dhaaf ah oo lagu kordhiyo Somalia, ay si shidi karto uun xaaladihii cakirnaa ee dalkaasi, isla markaasina ay sii kordhin karto dhibaatada iyo dhimashada dadka rayidka ah, haddii weliba ciidamadaasi la siiyo awodo badan oo ay weerarro dagaal qaadi karaan.
Wasiirka waaxda horumarinta Britain, Henry Bellingham, waxaa uu walaac ka muujiyey qorshaha ku saabsan in wax laga bedelo awoodaha ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee ah in loo oggolaado dagaal in ay la galaan kooxaha mucaaradka Somalia sida kooxda Al-Shabab, waxaana uu wasiirku sheegey in talaabadaasi ay dhibaatadeeda la iman karto, isagoo dhanka kale taageerey in ciidamadu ay dagaal galaan oo keliya marka la soo weeraro, si ay isu difaacaan.
Wasiirku waxaa uu goobta shirka uu ka socdo kula kulmey wasiirka Arrimaha Dibedda ee Eritrea, oo si lama filaan ah u soo booqdey shirka, iyadoo sida la ogyahay Eritrea ay sannadkii hore ku dhawaaqdey in ay isaga baxday Midowga Afrika, kadib markii ururka uu ku baaqey in cunaqabateyn lagu soo rogo dalkaasi, oo lagu xiriirinayo taageero uu siinayo kooxaha Islaamiyiinta Somalia ee dowladda ka soo horjeeda.
Wasiirka Horumarinta Afrika ee Britain, Bellingham, waxaa uu sheegey in Eritrea ay door weyn ka cayaari karto hanaanka nabad raadinta Somalia, xiriirka ay leedahay kooxaha mucaaradka awgii, isagoo intaa raaciyey in beesha caalamku aaney wax dan ah ka lahayn xukuumadda Asmara, balse ay qirsan yihiin in dalkaasi yahay xubin muhiim ah oo door wanaagsan ka cayaari kara arrimaha Somalia.
Mareykanka waxaa uu shirka u soo dirsanayaa masuul sare, kaas oo ah Xeer Ilaaliyaha guud ee dalkaasi oo ay wehlin doonaan saraakiil ka tirsan wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo FBI-da oo gacan siinaya ciidamada amaanka ee Uganda ee ku hawlan baaritaanada weeraradii ba'naa ee 11ka July ka dhacey magaalada caasimadda ah ee Kampala.
Madaxda ayaa dersi doona isla markaana ansixin doona agendayaashii ay soo diyaariyeen wasiiradooda arrimaha dibedda oo shir laba maalmood ah ku yeeshey magaalada Kampala.
Agendaha ugu weyn shirka waxaa markii hore uu ahaa horumarinta adeegyada hooyada iyo dhalaanka qaaradda, hase yeeshee, waxaa ajendahaasi laga hormariyey amniga gaar ahaan Somalia, kadib markii xaalada dalkaasi ka jirta ay ka sii dartey, iyo weeraro ay dad badan ku dhinteen oo lagu qaadey magaalada Kampala , kaas oo ay masuuliyadiisa sheegteen kooxda Al-Shabab ee dalka Somalia.